२० वर्ष काटेपछि महिलाहरूमा आउने पॉच परिवर्तन यस प्रकार छन « गोर्खाली खबर डटकम
२० वर्ष काटेपछि महिलाहरूमा आउने पॉच परिवर्तन यस प्रकार छन
४. २० वर्षपछि महिलाको मेटाबलिज्म स्लो हुँदै जान्छ र तौल बढ्दै जान सक्छ । तौललाई स्थीर राखिराख्नको लागि चिल्लो र कार्बोहाइड्रेडयुक्त खाना कम गर्नुपर्छ । यस्तै दैनिक बिहान ३० मिनेट मर्निङवाक पनि लाभदायक मानिन्छ ।५. हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण कपाल सुख्खा तथा जिंग्रिङ्ग बन्न पनि सक्छ । यस्तो बेला ३-४ चम्चा जैतुनको तेलले मालिस गर्दा उत्तम हुन्छ ।